Ciidanka NISA oo fuliyay howlgal lagu dilay Xubno katirsan Al-Shabaab | dayniiile.com
Home WARKII Ciidanka NISA oo fuliyay howlgal lagu dilay Xubno katirsan Al-Shabaab
Ciidanka NISA oo fuliyay howlgal lagu dilay Xubno katirsan Al-Shabaab
Howlgalka oo ahaa mid qorsheysan Ciidamada Nabadsugida Soomaaliya waxaa ay ka fuliyeen degaannada Cabanaane iyo Gumeysidiid oo u dhow degaanka Janaale oo katirsan Gobolka Shabeelaha Hoose.
Taliyaha Ciidanka Nabadsugida Gobalka Shabeelaha Hoose Tima weyne ayaa sheegay in howlgalka lau dilay Madaxii Miinada u qaabilsanaa Ururka Al-Shabaab iyo qaar kamid ah ilaaladiisa, kuwaas oo dagaal kala horyimid Ciidamada.
Sidoo kale waxaa uu sheegay taliyaha in howgalka lagu soo furtay qori Ak-47 ah Bustoolado Camero iyo Rimuudka lagu hago Miinooyinka qarxa ee waddooyinka lagu Aaso.
Ugu dambeyn Taliyaha Ciidanka Nabadsugida Gobalka Shabeelaha Hoose Tima weyne waxaa uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ilaa iyo inta ay ka saarayaan degaannada u dhow degaanka janaale ee Gobolka Shabeellaha hoose.
Howlgalkaan ay Ciidamada nabadsugida ka sameeyeen degaannada u dhow degaanka Janaale ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii la soo dhaafay dhowr qarax oo ay askar ku geeriyoodeen ay ka dhaceen degaanka Janaale.
Previous articleBeesha Caalamka” Ma jirto wax marmarsiinyo ah oo sabab u noqon karta dib u dhac kale oo doorashada ah”
Next articleSafiirka Soomaaliya ee Shiinaha oo taageeray in Xasan Cali Khayre uu hogaamiyo dalka afarta sano soo aadan.
Turkey claims it is still in talks with Russia for missile...
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo la kulmay Taliyeyaasha booliiska iyo militeriga
Suspect says he killed British MP to ‘prevent further harm to...
Midowga Afrika oo sheegay in ay qiimeynayaan tilaabadii lagu eryay Amb...